Umhleli wemicimbi eKorea Umhleli wengqungquthela yobungcweti eKorea
I-1. Indawo Ehlukile
Ikhono: I-5 Hall, Ukuma: 200 ~ 1,500, Sihlalo: 150 ~ 1,300 (Iyunithi: Umuntu)
Isikhala se-Creative / Trendy / 5 nge-15 Equipment
Ikhono: I-8 Hall, Ukuma: 80 ~ 1,000, Sihlalo: 60 ~ 500 (Iyunithi: Umuntu)
Ingadi / I-Luxury / Intshonalanga
Ikhono: I-10 Hall, Ukuma: 50 ~ 100, Sihlalo: 20 ~ 146 (Iyunithi: Umuntu)
Indabuko yaseKorea yaseKorea Ukusebenza kweKorea
Ikhono: I-5 Hall, Ukuma: 60 ~ 200, Sihlalo: 40 ~ 120 (Iyunithi: Umuntu)
IHanok / Umlando / Ukubuka Kwemvelo
Ikhono: I-2 Hall, Ukuma: Ayitholakali, Kuhleliwe: 60 ~ 197 (Iyunithi: Umuntu)
Umbukiso / Ukubuka kobusuku / Umfula weHan
I-Sevit Floating Island (Sevit Abanye)
Ikhono: I-4 Hall, Ukuma: 300 ~ 1,000, Sihlalo: 160 ~ 550 (Iyunithi: Umuntu)
IHan-river View / Umhlaba wokuqala oyintaba
I-2. Uhambo Olukhethekile
Funda ubuciko beTaekwondo
Isipiliyoni sokupheka saseKorea
I-Etourism inikela ngemicimbi esebenza ngokubambisana kwimisebenzi eyingqayizivele yokwakha iqembu, ukukhuthaza inkampani noma umvuzo. Zibandakanye emisebenzini yomzimba efana namakilasi wokudla waseK-pop wokudansa waseKorea, neTaekwondo okungenziwa kuphela eKorea. Imicimbi izovumela abasebenzi ukuthi basuke ehhovisi futhi babe nesikhathi sokuphumula futhi bavumele imibono emisha igeleze. Izinkampani zamukelekile ukukhetha izinkambo ezisungulwe ngaphambi kwesikhathi noma isicelo sohambo olwenziwe ngokusekelwe kunhloso yeqembu nezintshisakalo.
I-3. Ukuphathwa Kwendawo
I-Etourism yinkampani yokuphatha indawo lapho iphatha khona izindawo zokuhlala, izinto zokuhamba, izindawo zemihlangano, izindawo zokudlela, imicimbi enezihloko nezindawo zokudlela ze-Gala. Imininingwane ephethwe ngokucophelela iholela ekuhlelekeni okuhle, okuvumela abantu abaphezulu bezinkampani ukuthi bagxile ku-ajenda yomsebenzi noma emihlanganweni.
Ukusuka emahhotela ezinkanyezi anamuhla e-5 kuya kumahhotela wesitayela saseKorea, i-Etourism inganikeza indawo yokuhlala enhlobonhlobo.
Khetha ngokukhululekile izinhlobo zezimoto kusuka ebhasini i-45 setha ibhasi, i-25 seater deluxe bus, 7 ~ 9seater van to Sedan for principal wenkampani or high staff.
Amandla omuntu nesiphathi sephrojekthi
I-Etourism ihlala ilungele ukusiza izidingo zakho ukwenza imihlangano yakho iphumelele.
Ukudla (Buffet noma Course)
Ukusebenza (K-pop, DJ, njll.)
Umcimbi owenziwe ngomsila